Mike Campbell, a white farmer who took President of Zimbabwe Robert Mugabe to court in 2007 over his programme of land s
Mike Campbell, a white farmer who took President of Zimbabwe Robert Mugabe to court in 2007 over his programme of land seizures dies.
Zimbabwe Defence Forces troops seize control of the Zimbabwe Broadcasting Corporation headquarters as explosions are heard in the capital Harare amid reports of a coup against President Robert Mugabe.
Protests in Harare and elsewhere in the country continue despite police intimidation and pleas by President Robert Mugabe for them to stop.
National "Stay Away" protests, organized over the Internet via the WhatsApp social messaging platform, take place in Zimbabwe, following fears of an economic collapse amid calls for President Robert Mugabe's resignation.
Thousands of opposition supporters rally in Harare, Zimbabwe, against President Robert Mugabe and the deteriorating economy. The rally was banned by the police, however, it went ahead after a ruling by the High Court sanctioned the protest.
Zimbabwe President Robert Mugabe assigns all diamond mining operations to the newly formed, government-run Zimbabwe Consolidated Diamond Company, and orders eight foreign diamond mining companies from the country.
A court in Zimbabwe frees 38 people detained for weeks on charges of attempting to overthrow President Robert Mugabe, after they watched videos of the Arab Spring.
Brazil and Zimbabwe play a football game in front of a sell-out crowd in Harare ahead of the 2010 FIFA World Cup in South Africa, the first time since independence that a non-African team has performed in the country. President Robert Mugabe and Prime Minister Morgan Tsvangirai both attend and civil servants are given time off work.
Robert Mugabe, Morgan Tsvangirai and Arthur Mutambara, in a rare display of solidarity, call for an end to international sanctions on Zimbabwe and instead request investment.
President of Iran Mahmoud Ahmadinejad opens a trade fair in Bulawayo on his tour of Zimbabwe as the country's President Robert Mugabe back's Iran's "just cause" for developing nuclear energy.